gabdhaha ma kacsadaan sideese lagu gartaa? | Gaaloos.com
Home » galmada » gabdhaha ma kacsadaan sideese lagu gartaa?
gabdhaha ma kacsadaan sideese lagu gartaa?
Tiradaasi ­ bay leeyihiin­ intaas wuu ka yarayn karaa ama ka badin karaa, ha yeeshee waa inuu xaaskiisa la tashadaa, il gaar ahna ku eegaa rabitaankeeda, inkastoon haween la harraad goyn karin. Si kastaba arrintu ha ahaatee, labada ruux ee isqabaa waxa ay isu galmoon karaan mar kasta oo ay iska gartaan rabitaan iyo inay u dulqaadan karaan galmada, iyagoon dareemin wax aan ka ahayn xoogaa yar oo daal.
ah oo yimaada kolka ay hawsha galmadu dhammaato.
Title: gabdhaha ma kacsadaan sideese lagu gartaa?